Soy de Mac na-etinye uche maka WWDC na Mọnde a, June 13 | Esi m mac
Na Monday a anyi nwere Apple, ị nwere ike soro anyị? Dị ka ọ dị n’oge mmemme mbu, ihe ngosi na mmemme Apple ndị ọzọ, ndị otu Soy de Mac niile nọ na-aga n’ihu iji mezuo iwe site na mbido mechie isi okwu na Mọnde June 13.
Eziokwu bu na obughi oge di anya gara aga anyi huru ma soro na ike Apple isi okwu, na oge ahu obu onwa Mach ma eweputara ndi ohuru, tinyere ihe ndi ozo. iPhone SE na 9,7-anụ ọhịa iPad Pro. Apple nwere ihe ọ bụla dị njikere inye isi okwu ọzọ, mana na nke a ọ bụ WWDC na nke a, n'adịghị ka isi okwu "ịtụnanya" na Machị, bụ ihe omume ewepụtarala oge ụfọdụ tupu ọbịbịa nke oge ọkọchị.
N'ihi nke a, anyị chọrọ ịkọrọ gị nke ọ bụla n'ime akụkọ ahụ edepụtara anyị na ya ma anyị na-akpọ gị òkù isonye na blọọgụ anyị, akaụntụ gọọmentị Twitter, Facebook ma obu Google +. N'ime ha ka ị ga-ahụ ozi niile si na San Francisco.
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na nhọrọ ndị a iji mara ozi niile, na isi okwu Apple a anyị na ndị ọrụ ibe anyị sitere na Actualidad iPad na Actualidad iPhone zute ọzọ maka mgbasa ozi ndụ nke ihe omume ahụ. Ya mere na awa ole na ole tupu mmalite nke isi okwu, onye nchịkọta akụkọ sitere na weebụsaịtị ọ bụla ga-arụ ọrụ mkpuchi site na ngwá ọrụ a. Anyị ga-ebido ntinye na Coverit na mbido ka ị nwee ike ịgbaso ya, ọbụlagodi zipu ozi echiche gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ n'oge ahụ.
na Oge mmalite nke isi okwu a nke mepere WWDC izu bu ndi a:
Spain na 19:00
Mexico, Colombia, Ecuador na Peru n'elekere 12:00
Chile na Venezuela na 13: 00 pm
Argentina na 14:00
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Soy de Mac na-etinye uche maka WWDC na Mọnde a, June 13
Olee otú iji naghachi-ehichapụ foto gị iPhone